Ndingahlala endlwini yam emva kwentengiso yesherifu ye-NJ? Ndingahlala ixesha elingakanani ekhaya emva kokuba kuthengisiwe ngembonakalo yangaphambili eNW? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa koKhuselo kunye namaGqwetha abaGqithisi
ikhaya / Blog / New Bankruptcy / Ndingahlala endlwini yam emva kwentengiso yesherifu ye-NJ? Ndingahlala ixesha elingakanani ekhaya emva kokuba kuthengisiwe ngembonakalo yangaphambili eNW?
Disemba 31, 2019 New Bankruptcy, Ukugxothwa eNtsha kweJersey, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Intengiso yeSheriffUshiye uluvoI-Veer Patel
Sibuzwa malunga nokucela okulandelayo ngabaninimzi abaninzi baseNew Jersey abajongane nokugxothwa: “Ndingabe ndihlala endlwini yam emva kokuba ukuchithwa? "Impendulo elula yile," Ewe ungahlala endlini yakho emva kokubhencwa. "
Umbuzo olandelayo uhlala uthi: "Ndinghlala ixesha elingakanani endlwini yam emva kothengiso lwesherifu e-NJ?"
Impendulo kule ithi “Kuyaxhomekeka.” Impendulo ende kukuba ungahlala ekhaya de kufike isherifu ikuvalele ngaphandle, oko kungathatha inyanga okanye ixesha elide kuxhomekeke kwinto eyenzekileyo emva kwentengiso.
ENew Jersey, emva kokuba umntu echazwe kwangaphambili, zimbini iintlobo zekhaya.
1. UNESIQINISEKISO esiphantsi kwesivumelwano sokuqeshisa. Nokuba lihlabathi okanye libhaliwe, kwaye;
2. Ke une-OWNERS ezilapho kuba wayenepropathi ngaphambi kokuba achazwe. Kwaye, ukuqhubeka nokugcina ubunini emva kokuba kugqityiwe ukubhengezwa.
Ngamnye wabahlali unamalungelo ahlukeneyo kwaye kuxhomekeke kuhlobo lomsebenzi onokuhlala kulo umgca wexesha. Siza kukugubungela ngokufutshane.
Ukuthathwa kwembonakalo kuthatha ixesha elingakanani eNew York?
Ixesha lokutyhileka kweNew Jersey elingaqwalaselwanga linokukhawuleza njengeentsuku ezili-114 okanye likhuphe ngaphezulu konyaka ukuba amagqwetha ombolekisi ahudule iinyawo zawo. Ngo-2018, ixesha lokuxelwa kwangaphambili kweNew Jersey lehle laya phantsi lonke ixesha. Ukuba kukho umntu okuxelela ukuba kuthatha iminyaka ukubonwa kwembonakalo ye-NJ ukuba kwenzeke okanye ukuba unexesha elininzi, abanakuphikiswa. Bona oku Ukushicilelwa kukhutshwe yiNew Jersey Judiciary. Ukuba uyakuphikisa ukubonakaliswa, okanye ukubhengeza ukuba ungabinakho, unakho ukuyeka ukubekwa kwindawo yonke usindise ikhaya lakho.
Nokuba umchasi ekuloo mbambano okanye akunjalo, kunokubekwa imihla ethile ekufuneka ihlangatyezwe phambi kwenyathelo yi-Plaintiff. Umzekelo, a Ummangalelwa ineentsuku ezingama-35 zokufaka i-an impendulo kwi isikhalazo esingekabonakali phambi kokuba kungeniswe into engafakwanga. Eli lithuba lokuba ummangalelwa afumane ixesha elongezelelekileyo ngelixa esilwa ukubonakala. Ukuba kungenziwa okungagqibekanga, ummangali kufuneka alinde kwiintsuku ezingama-45 ngaphambi kokuba enze isicelo somgwebo wokugqibela. Inkundla iya kuthi emva koko ikhuphe isigwebo sokugqibela. A Umbhalo wokubulawa Iya kusiwa kwaNothimba ukuze iqale inkqubo yokuthengisa kwangaphambili. Umbolekisi kufuneka anikwe ubuncinci isaziso seentsuku ezili-10 ngaphambi kokuba ukuthengiswa kusengaphambili kwenzeke, kwaye isaziso kufuneka sipapashwe. Kwiimeko ezinqabileyo, inkosi ekhethekileyo inokusetyenziswa ukuthengisa ipropathi. Kwaye, yakuba isherifu yesigcini iselucwangcisiwe, obolekayo unokucela ukuba intengiso ifuduselwe kwiintsuku ezingama-56. Lo mgca wexesha wahlukile kunokuchazwa kwangaphambili kwetyala.
Masisebenzise ukugxothwa emva kokuthengiswa kwembonakalo yangaphambi kokuba umntu abonakale njengomzekelo wokuhlala ixesha elide umntu endlwini yakhe emva kokubhencwa.
Unokuba neentlobo ezimbini zabathengi abanokuthenga ipropathi.
1. Ibhanki / obolekayo uthenga ipropathi njengoko kungekho mntu ubiza ixabiso elikhulu ngokwaneleyo ukuba angabi ngophumeleleyo kwipropathi kwintengiso kunye nebhanki angazithengisa ngayo ngaphandle kwendali ebhengezwe ngaphambili, okanye;
2. Umthengi wesithathu othenga umhlaba. Nokuba yeyiphi indlela bobabini ekufuneka bayifumene. Banokukwenza oku ngenye yeendlela ezimbini. Iijaji eziseburhulumenteni ndikholelwa ukuba ziye zangqinelana kule nto kwaye bazama ukwenza inkqubo yokukhupheleka ifane ngakumbi kulo lonke ilizwe laseNew Jersey.
Ndingahlala ixesha elingakanani ekhaya emva kokuba kuthengisiwe ngembonakalo yangaphambili eNW?
xa intengiso yesherifu ngaphandle kwepropathi. Ubuncinci lixesha leentsuku ezili-10 zokulinda ngaphambi kokuba kuziswe. Kwaye ukuba ngaba ngumthengi wesithathu, ke itayitile ayinakuze ihanjiswe de ibe intlawulo ihlawulwe. Kweli xesha leentsuku ezili-10 umnini-khaya unokukhulula ipropathi, okanye afake ukubhengezwa njengongenamali kangangeentsuku ezili-10 ukuya kwiintsuku ezingama-60. Zininzi iindlela zokwenza Ukulwa nembonakalo yangaphambili e-NJ. Nje ukuba itayitile izisiwe, isenzo sokukhutshwa / ukukhutshwa sinokuqala ngumnini omtsha. Unothimba kufuneka alandele le Imithetho ye-NJ yesherifu yokuthengisa kwintengiso yepropathi.
Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi iVicinage onokuthi ibhanki isebenzise enye yeendlela zokususa umntu kwipropathi ngokusebenzisa indlela ekhethekileyo yaseburhulumenteni enje ngeSishwankathelo sokuGuguleka kwezinto. Amaxesha amaninzi uyakubona kwisenzo esibonisa kwangaphambili sentshukumo yendawo esisixhobo sayo esibonisa ngokwayo. Emva kokuba intsingiselo yefayile ifayilisiwe kwaye unikezelwe uyakubona umbhalo okhuphekayo. Umbhalo wokukhupha into ke uvumela ukuba umthengi abe nesheriff oyisusileyo. Oku kungathatha iinyanga ezininzi. Ngeli xesha usavumelekile ukuba uhlale kwikhaya elinikwe ifandesi.
Enye indlela yokwenza ukuba ususe umnini-khaya wangaphambili, osele enziwe kwizithili ezifana neHudson kunye ne-Essex uhamba ngecandelo le-Special Civil. Ukwenza oko kubizwa ngokuba sisenzo sokukhulula. Ayisosenzo somqeshi somhlaba; sisenzo sokukhupha.
Yindlela yokubonisa unobangela oxelela inkundla ukuba:
Uyazi ukuba ndingumnini wam,
Ndithenge le ndawo kwintengiso yesherifu
Awungobanini, kodwa wawungumnini,
Akukho sivumelwano sengqeshiso, kwaye;
Ulapho ngaphandle kwemvume.
Njengomnini wangaphambili umelwe kukushiya kanye xa sele umiwe kwinkundla yamatyala emva koko wakhonza kuwe. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukuhlala, inkqubo iya kuqhubeka nenkundla. Kuya kubakho umhla wokubuya kwinkundla yamatyala. Ngomhla wokubuya kuya kubakho umgwebo obekiweyo. Kukho ukhuseleko olunqabileyo kule meko. Emva koko, ngokufanayo, kuya kunikezelwa isherifu kwisherifu. Unothimba uya kunikwa umbhalo. Kukho intlawulo yokufayila echaphazelekayo. Unothimba uya kucwangcisa usuku lokuvala. Ukuba awushiyi, isherifu iya kuza ikukhiye. Ke ezi ndlela zimbini onokuthi uzenze ngazo zombini ezi ndlela iibhanki okanye abathengi abanokubasusa ngayo abantu, kodwa okwangoku ungahlala ekhayeni lakho.
Ungahlala de ibe ayisekho eyakho de ibe isherifu ikuvalele ngaphandle kwepropathi. Kukho iindlela zokufumana ixesha elongezelelweyo kunye nokuba nezinto. Njengo, ukunxibelelana nomthengi kwaye ucele imali ukuze ulungiselele izitshixo. Njengomntu oqeshayo amalungelo akho ayaqhubeka phantsi kwesivumelwano. Nangona kunjalo, ukuba umthengi ufuna ukuhlala iyunithi yakho ngokobuqu, unokugxothwa. Kwakhona, awunakuba nesivumelwano sokuqeshisa esiya kuthi sisekwe yinkundla. Awunokwazi qeshiso Ipropathi yokuvumela utatazala wakho ukuba ayifumane ngeedola ezingama-500 ngenyanga kwiminyaka emi-5 xa lo mhlaba uza kuqeshisa ngeedola ezingama-2000 ngenyanga. Njengomntu oqeshayo unamalungelo, njengomnini wangaphambili amalungelo akho amaninzi acinyiwe, kwaye njengomnikazi omtsha banamalungelo. Wonke umntu unakho amalungelo alinganayo Kule meko kwaye iinkundla ziya kuwanyanzela la malungelo.
Ukuba uyazi ukuba ixesha lokuthengisa liphelile kodwa alikaphelelwa kwaye usenokhetho. Ukuba ufuna ukuthetha no Ukuchazwa kwegqwetha eligqwetha Ngubani oqondayo ukugxothwa umnxeba 973-200-1111 okanye i-imeyile [Imeyile ikhuselwe]